Iiapp kunye neeSayithi eziHlangayo eziPhambili ezingama-25: Yeyiphi eyona App yokuDibana kwabantu abaDala yaBadala - Ubudlelwane
Eyona Ubudlelwane Ezona zixhobo ziLungileyo zokuHlola ziHlolwe kwiiNdibano eziqhelekileyo zeNSA
Ezona zixhobo ziLungileyo zokuHlola ziHlolwe kwiiNdibano eziqhelekileyo zeNSA
Ukutshata okanye ukudibanisa yinto entle! Kodwa, ngamanye amaxesha, yonke into onokuyifuna ngumhlobo nje onezibonelelo- okanye ukuma-ubusuku obunye, nkqu. Asinguye wonke umntu ongena kwizibophelelo zexesha elide!Nangona kunjalo, kwihlabathi liphela elinabantu abaninzi abathandanayo, kunokuba nzima ukufumana ezona ndawo zingcono zokutsala kunye neeapps kwiimfuno zakho zesondo. Akuqhelekanga ukuba ungqubeke kwi-bots, nokuba.
Kungenxa yoko le nto senze i-swiping enzima ukuze ufumane ii -apps zokusebenza ezisebenza kakuhle. Ayinamsebenzi nokuba ukwi flings, iminxeba ethinjiweyo, okanye ubusuku obunye, siye saqulunqa ezona ndawo zingcono zokutsala kunye neeapps ukuze ukufumana iihaksi kube lula.
IiSayithi eziLungileyo zokuLanda kunye neeNkqubo
Olona luhlu lusebenzayo ngoku Umhlobo womntu omdala
Eyona nto iluncedo kakhulu kubafazi- Bumble
Eyona nto iluncedo kakhulu yasimahla Isilinganisi
Eyona ndawo ilula yokufumana amakhwenkwe- UAshley Madison
Eyona nto intsha yokusebenza ngoku Ihenjisi
Inkqubo entsha yokuhombisa yamashumi amathathu - Ukuzonwabisa
NjengoTinder kodwa kuphela ii-hookups- Isixhobo esinyulu
Eyona nkqubo iphakamileyo yabasetyhini ukuya kwindoda - Ukufuna
Eyona LGBTQ + iapp yookup - YAKHE
Eyona ndawo ingahlawulelwayo yasimahla yajika usetyenziso - okcupid
Olona hlelo lokusebenza lubalaseleyo ukuba ungaphaya kwama-50 IsilivereSingles
Olona hlelo lokusebenza lwe-gay hookup- Isitshisi
Eyona ilungele iiBDSM hookups- Alt.com
Eyona ilungele iiSwinger - Ukutshintsha
Eyona nto ingcono ukuba awunomdla kwii-hookups - eHarmony
1. Umhlobo womntu omdala -Eyona App yokuHamba ngokuLungileyo kunye neSiza ngokubanzi
Uluntu olwabelana ngesondo
Isiseko esikhulu somsebenzisi
Ukufikelela ngokukhululekileyo kwiiblogi zeqonga kunye namaqela
Yabelana ngeendaba ezithandekayo
Uninzi lwamalungu lufuna ubudlelwane obuqhelekileyo
Ukuba ufuna ulonwabo ngokwesondo (okanye ujonge ukuphonononga izinto ezintsha ngokwesondo), iAdultFriendFinder inokuba ngumdlalo olungileyo kuwe. Uninzi lwabantu luyabelana ngesondo apha, kwaye unokwabelana ngeefoto ezithandekayo kunye neevidiyo ukutsala umdla onokubakho.
Kananjalo, ngenxa yokuba indawo yabemi yahlukile, inabantu abadala, abantu abathandana besisini esinye, kunye nezesini, unokufumana zonke iintlobo zamaqabane angenantambo apha. Iqonga libonelela ngeendlela zonxibelelwano ezahlukeneyo, kubandakanya nengxoxo ephilayo, ukuze unxibelelane nabanye abasebenzisi ngayo nayiphi na oyithandayo.
Isiseko somsebenzisi kwiAdultFriendFinder asinakuba sikhulu, kwaye uninzi lwabantu luhlala eMelika. Bhalisa kwaye ufikelele kwiibhloko zebhusayithi kunye namaqela simahla. Kuyancomeka ukushiya izimvo zakho, nazo.
Mbini. Bumble -Eyona App yoLuhlu oluLungileyo lwaBasetyhini
Fumana iimatshisi ekuhambeni ngeapp
Abafazi baphethe umdlalo
Izigidi zeendwendwe zenyanga
Inani elithembekileyo lesini
Nxibelelana nabanye abasebenzisi simahla
Kwaye ngoku jonga oku: iapp yokuxhuma exhasa abasetyhini! Ukuba ungumfazi kwaye ujonge ukwenza inyathelo lokuqala kubudlelwane obuqhelekileyo, uBumble ulapha.
Inyani yokuba umlinganiso wesini uphantse ulingane yibhonasi. Yonyusa nje amathuba akho okufumana umntu.
Iifoto zeprofayili zisesidlangalaleni, kwaye amalungu anokunxibelelana simahla. Ke, ukuba ungumfazi okhangela ukuba ophethe unxibelelwano lwakho, kwaye uxoxe nabo simahla, kunokuba lixesha lokuba ujoyine iBumble.
Insiza yesiza ikuvumela ukuba ubenolawulo lokudibana kwakho ekuhambeni. Yiyiphi into edibeneyo ekuqwalaseleni ukuba akunakubakho amanye amalungu anokujonga. Iqonga liqhayisa ngezigidi zabakhenkethi benyanga.
3. Isilinganisi -Eyona App yasimahla yokuHlala
Inkqubo esekwe kwindawo yokudibanisa
Imiyalezo yabanye abasebenzisi yasimahla
Fikelela kwiminxeba yevidiyo ebukhoma
Izigidi zabantu ukujonga
Umsebenzi womsebenzisi uphezulu
Kulungiselelwe abo bathanda izinto zasimahla kwi-hooking up app, iTinder inokuba yindawo ekufanele ukuba ube kuyo. Uninzi lwezinto eziphambili ziyancoma, kubandakanya ukuthumela imiyalezo (yamalungu afanayo). Ezinye izinto ezikhululekileyo zibandakanya ukufumana amalungu kufutshane nawe, ukukhuphela usetyenziso lweqonga, kunye nokulayisha imifanekiso.
I-Tinder inezigidi zabantu, eyonyusa amathuba akho okungqubeka kumdlalo. Umsebenzi welungu awunakuba ngaphezulu, nawo. Intsingiselo, amaqabane esini anokubakho angenza inyathelo lokuqala!
Yonwabela iminxeba yevidiyo ebukhoma, kwaye uqhagamshele kwi-Snapchat, kwi-Spotify, nakwezinye ii -apps ezingenasiphelo. Ungakhathazeki ukuba uvela kuluntu lwe-LGBTQ +, nokuba. Tinder inendawo kuwe.
Zine. UAshley Madison -Eyona ndlela yokuSebenzisa ngokuLula ukuSebenzisa
Uninzi lwamalungu afuna abantu abangaphandle komtshato
Iqonga ekulula ukuhamba kulo
Iphuli enkulu yobulungu
Vie iprofayile yelungu yasimahla
Ukuba ufuna ii-hookups zokusebenza ngonxibelelwano olulula lokusebenzisa, u-Ashley Madison uye wakugubungela. Ubulungu obukhulu bonyusa amathuba akho okufumana umntu, kwaye uluntu olusebenzayo luthetha ukuba akunakufane ube nebhokisi engenayo engenanto.
Le app, eyenza indawo ethembekileyo yabantu abafuna imicimbi emitsha, nayo kulula ukuhamba. Ngombulelo, unokuzikhuphelela simahla kwaye ufumane ibhola eqengqelekayo ekuhambeni.
E-Ashley Madison, ungabhalisa, usebenzise iifilitha zokukhangela, kwaye ujonge amanye amalungu amalungu ngaphandle kokuchitha ipeni. Ujongano lomsebenzisi olunobuhlobo alunakuba lula ngakumbi.
5. Ukufuna -Eyona ilungileyo kwiiShukela Hookups
Inani lesini liphantse lilingane
Nxibelelana nabanye abasebenzisi ngokukhululekileyo
Ukulungela ootata beswekile kunye neentsana ezineswekile
Uninzi lwabasebenzisi banobudlelwane obuqhelekileyo
Enye yezona ndawo zibalaseleyo zokufumana umlinganiso othembekileyo kumadoda ukuya kwabasetyhini, ukuKhangela yindawo ekhuselekileyo yootata abajongana nokungena kulwalamano oluqhelekileyo nabantu abancinci. Kwaye ngokuchaseneyo.
Iqonga alinakuba lula ukuhamba kwaye libonise abasebenzisi abaninzi, abanokuba ngamaqabane anokubelana ngesondo ngokungaqhelekanga- okanye nokuma ubusuku obunye.
Nxibelelana nabanye abasebenzisi simahla, ukuba ngaba umfanekiso wakho weprofayile uvunyiwe. Kwaye ukuba uhlala usendleleni, ukufuna i-app kukusongele. Khuphela mahala - iyafumaneka kuzo zombini izixhobo ze-Android kunye ne-iOS.
Njengongeniso oluninzi kolu luhlu, eli qonga libonelela ngeenkonzo ezincedisayo. Bhalisa, fumana imatshisi, kwaye uthethe nabo simahla.
6. okcupid -Iyona ndawo isimahla yokuHamba kunye neApp
Umsebenzi welungu eliphezulu
Uninzi lwabasebenzisi bafuna ii-hookups ezinzulu
Iimpawu eziphambili, kubandakanya imiyalezo, ziyafumaneka simahla
Fikelela usetyenziso oluselfowuni lwezixhobo ze-Android neze-iOS
Ukuba ukhetha ukusebenzisa indawo yasimahla kunesicelo esincedisayo, nantsi indawo yokuthandana enikezela uninzi lweempawu zayo ezisimahla. Isiseko somsebenzisi apha asinakuba sikhulu kwaye sisebenze ngakumbi. Ngenxa yoko, unokubaleka ngokulula kwiqabane elinokubakho ngokujonga- uthathela ingqalelo amalungu aliqela emva kokudibana kakhulu.
Yonwabela umthwalo opheleleyo weempawu zasimahla kule ndawo, kubandakanya ukusayina, ukukhangela kunye nokuthumela imiyalezo kwabanye abasebenzisi, kunye nokugcina umkhondo wokuba uthanda bani. Ezinye izinto ezikhululekileyo zibandakanya ukubukela imifanekiso yemidlalo enokwenzeka, ukungenisa iifoto zakho kwiindawo eziphambili zemithombo yeendaba, kunye nokukhuphela usetyenziso lwazo.
Bhalisa kwaye ufumane iingcebiso zomdlalo kwangoko xa ukhetha.
7. IsilivereSingles -Eyona ndawo yokuHamba ilunge ngaphezulu kwama-60
Iqonga likhuselekile ukusebenzisa
Jonga ezinye iifoto zamalungu mahala
Indawo yenzelwe ukuba ilungele ii-singles ezindala
Inani elilinganayo elilinganayo ngokwesini
Fikelela usetyenziso olungenazinto zininzi
Kubemi bethu abadala, le isenokuba yindawo yokuhlangana nabantu ofunda nabo. Indawo yenzelwe ukuhambelana nabantu abadala abadala: kukhuselekile kwaye kulula ukuyisebenzisa, kwaye inika uvavanyo olunobuntu olunenkcukacha ngexesha lokubhalisa.
ISilverSingles inexabiso elilinganayo ngokwesini, nayo, eyonyusa amathuba akho okufumana abanye abafuna ukulala ngesondo. Uninzi lwamalungu aneminyaka engama-50 + nangaphezulu, ke uyankqonkqoza kuphela kwimidlalo ekwiminyaka yobudala bakho, kwaye ufundile.
Iqonga linohlelo lokuthandana, olufumaneka kwizixhobo ze-android kunye neze-iOS, kwaye unokuzikhuphela simahla. IiFreebies kwiiSilles singles zibandakanya ukubukela ezinye iifoto zabasebenzisi, ukufumana iingcebiso zomdlalo, kunye nokuthanda amaqabane aqhelekileyo.
8. Alt.com -Eyona ilungele iiBDSM Hookups
Amalungu afuna ukudibana kweBDSM
Abasebenzisi abasebenzayo baneminyaka engama-25 ukuya kuma-34 ubudala
Fikelela kwiingxoxo ezibukhoma zevidiyo simahla
Ngaba ujonge ukuzalisekisa iminqweno yakho yesondo? I-Alt.com inokuba yeyona app yakho ilungileyo yokufumana ubhontsi- uninzi lwamalungu apha lukuBDSM. Indawo inamakhulu ezigidi zabasebenzisi, ukuze ube nakho ukufumana iqabane.
Abasebenzisi abasebenzayo baneminyaka engama-25 ukuya kwengama-34 ubudala, ukuze wazi ukuba loluphi uhlobo lobudala ekujolise kulo kwimidlalo enokubakho. Kwaye iiprofayili zamalungu ezineenkcukacha zivumela ukuba uvavanye imihla enokwenzeka ngaphambi kokuphosa umgca wokuvula.
Njengawo onke amangeno kolu luhlu, ii-freebies azikho ngaphandle kwiAlt.com: bhalisa, udlale ngothando, kwaye ujoyine amagumbi engxoxo ngaphandle kokuchitha idime.
9. Isitshisi -Eyona App yokuLungiselela iGay
Uninzi lwamalungu lufuna unxibelelwano lwexesha elifutshane
Isiseko esisebenzayo, esikhulu somsebenzisi
Abasebenzisi bangamadoda ali-100%
Ukulingana kusekwe kwindawo
Nxibelelana nemidlalo enokubakho ngaphandle kwentlawulo
Nawuphi na umntu othandana naye egumbini? Unokufuna ukujonga ngaphezulu kweGrindr. Ukuzibandakanya okuphezulu komsebenzisi eqongeni kwenza ithuba elihle lokuzenzela umdlalo. Kwaye inkqubo esekwe kwindawo-ayinakuba lula ngakumbi. Ngubani ongafuni iqabane lokwabelana ngesondo kwindawo yabo, emva kwayo yonke loo nto?
Ubulungu eGrindr ngamadoda ayi-100% ke amathuba akho okufumana imihla enokubakho yesini akathotyelwa.
Bhalisa simahla kolu luhlobo lungenantambo-luqhotyoshelweyo kwaye wonwabele ezinye izinto zasimahla, kubandakanya ukubhalisa, ukujonga umdlalo, ukukhangela iiprofayili zamalungu, ukuthumela imiyalezo imihla enokubakho, nokunye okuninzi.
10. Ukutshintsha -Eyona ilungele iiSwinger
Amalungu abelana ngesondo
Abasebenzisi bavulelekile ekwabelaneni ngesibini
Amalungu afuna ukuhlangana ngokwesondo
Joyina amagumbi engxoxo simahla
Ngokwenyani kwigama layo, iSwapfinder yindawo yokutshintsha iqabane. Kwaye akunakuba lula ukufumana ukuhlangana ngokwesondo kwiqonga. Amalungu athetha ngokuzikhethela kwabo ngokwesondo, kwaye bavulelekile ekwabelaneni ngesibini.
Iqonga liqhayisa ngesiseko esikhulu somsebenzisi (uninzi lwamalungu asuka eUnited States) ukwandisa amathuba akho okufumana umdlalo. Kwaye inyani yokuba abasebenzisi apha bayabelana ngesondo kukudibanisa.
I-Swapfinder ikuvumela ukuba ujoyine amagumbi okuncokola kunye nezimvo kwimithombo yeendaba, ezinjengeevidiyo kunye neefoto, simahla.
Joyina simahla kwaye ibhola iqengqeleka!
Shumi elinanye. eHarmony -Eyona ilungele izibini ezikhulileyo
Indawo inecandelo lama-singles aqolileyo
Jonga ezinye iiprofayili zamalungu mahala
Amacandelo eProfayili aneenkcukacha
Uvavanyo lokuhambelana ngokugqibeleleyo kubhaliso
Iqonga lilula kwaye kulula ukulihamba
Izibini eziqolileyo, uphi? IHarmony inokuba yeyona app yakho ilungileyo yokukhangela. Ukutshatisa kusekwe kuvavanyo lobuntu olunzulu, ukonyusa ukungqinelana. Iiprofayili ezilapha azinakucaciswa ngakumbi, nazo nje, ukuze uvavanye imidlalo enokubakho ngaphambi kokuqhekeza umkhenkce.
Kwaye ungakhathazeki, iHarmony iyazi ukuba ungummi omkhulu. Benze kwalula kuwe ukuhamba ngeqonga labo, kungasathethwa ke ngokunikezela ngecandelo lonke elinikezelwe kuwe, abantu abadala.
Ii-Freebies azikho ngaphandle kwesi siza kwakhona: ukusuka ekubhaliseni ukujonga iiprofayili kunye namalungu owathandayo, ngekhe uchithe nepeni.
Enkosi kuhlelo lokusebenza lweHarmony, awunyanzelekanga ukuba uthathe iPC yakho uhambe nayo naphi na, unikwe iminyaka yakho. Bamba ifowuni yakho (okanye ithebhulethi) kwaye ukhangele iimatshisi ekuhambeni.
Imbaleki-Ups: Eyona ilungileyo yokuSebenzisa iiHookup zokuSebenzisa
Yakhe Uhlelo lokusebenza lokudibanisa i-LBGTQ + yoluntu kuphela
Sicocekile - iqonga lezinto ezizenzekelayo
IVictoria Milan - iqonga lokuloba ngemicimbi eyimfihlo
Imicimbi eshushu -Indawo yokubonisana yokufumana ulwazi ngokufihlakeleyo
Umntu oFumana iziTabane -Indawo yokuthandana yezitabane zasekhaya
Uthuli - indawo yokufumana imiyalezo engamanyala ngefowuni
Intabalala yeentlanzi-iqonga lezinto ezinokuchukunyiswa luthando
I-99 Flavour-usetyenziso lokuthandana kwabanomdla ngokwesondo
Ngena ngaphakathi-usetyenziso lokungena kuzo zonke iintlobo zesondo kunye nokukhetha
I-Clover-usetyenziso lokuthandana lokuhlangana ngokwakho
I-Red Hot Pie-indawo ekusetwa kuyo izinto ezahlukeneyo
Yazi ii-Ins kunye neeOuts ze-Hookup App Scene:
Uyikhetha njani eyona App ifanelekileyo yeeHookups
Ngelixa sinokudwelisa ezonaapps zilungileyo zokukhangela ngaphandle, ayonzakalisi ukuzikhuphela enye (okanye nangaphezulu) ngokwakho - kwimeko enje. Nantsi indlela:
Linganisa iWallet yakho
Ezinye iiapps zibonelela uninzi lweempawu ezingundoqo simahla. Abanye babanikela ngentlawulo. Zibuze ukuba ngaba iqonga lasimahla elinokuthi likuncede ngokufanelekileyo iimfuno zakho - okanye ukuba ukhetha ukuchitha imali encinci kwindawo yokubhalisela, ngaphandle kolula isipaji sakho
Zama ngeendlela ezahlukeneyo
Ngamanye amaxesha, iimvavanyo zivelisa iziphumo ezilungileyo. Ukuzama ngeendlela ezahlukeneyo zokuthandana kunokunceda umhlaba ukuba ube nezona ndawo zingcono zokuthandana phaya.
Ixabiso elinokuthi lingathethi uMgangatho
Asinakukucinezela oku ngakumbi. Kodwa amanye amaqonga abiza kakhulu phaya akaboneleli ngeenkonzo ezisemgangathweni. Ukutsiba ingqekembe, ezinye zexabiso eliphantsi aziboneleli ngeenkonzo zangaphakathi. Gcina nje engqondweni njengoko ujonga i-intanethi ngeyona ndawo intle yokuthandana.
Ufuna Ukunxibelelana Njani?
Ngaba ungangcono ngokuncokola bukhoma? Okanye, ukhetha ukuthumela umyalezo, endaweni yoko. Ngaba unxibelelwano nge-imeyile indebe yakho yeti? imeyile. Ezi, nangaphezulu, zezinye zezinto ofuna ukuzijonga, njengakwii -apps zexesha elide zokuthandana.
Funda uPhononongo loMsebenzisi
Ayinamsebenzi ukuba awukho kubudlelwane bexesha elide, kodwa imigaqo ihlala ingaguqukanga. Funda ingxelo evela kubasebenzisi bangaphambili ngaphambi kokusebenzisa iapps yokuthandana enokubakho. Kuya kunceda ukwahlula ingqolowa kumququ.
Iindawo zokuBonana ngokuBanzi okanye iiSayithi zeNiche?
Ezinye iihapps zenzelwe ngokukodwa ii-hookups. Abanye bahlangabezana nomthwalo opheleleyo wokusetana, kunye nokuthandana okungaqhelekanga kuyinxalenye yayo. Yiya kweyona nto ihlangabezana neemfuno zakho.
Zeziphi iiSayithi zokuHlala eziSimahla?
Uninzi lweendawo eziphezulu zokukhangela azikho simahla ukuba zingasetyenziswa. Kodwa ukuba ufuna amabala kunye nezinto ezininzi ezikhoyo ezifumaneka simahla, kubandakanya inkxaso yabathengi iiyure ezingama-24 ngosuku, ezi zinokulungela ityala.
Umhlobo womntu omdala
Iingcebiso zokuKhangela phezulu
Ngaba ujonge ukusebenzisa ezonaapps zilungileyo zokukhangela njenge pro? Emva koko kuya kufuneka uyile imigaqo yomdlalo. Siyathemba ukuba ezi ngcebiso ziyanceda.
Musa Ukungena Konke
Ngokungafaniyo nolwalamano olunzulu, ukudibana nomntu ongathandani naye ngokwesondo okwexeshana, kwaye iqabane lakho elinokubakho mhlawumbi liyakwazi oko. Ukungena konke kunokulimaza iimvakalelo zakho xa ilixesha lokusongela izinto.
Lazi ixesha lokuhamba
Emva kokuba usondelelene kube kanye okanye kabini, okanye kunjalo, funda phakathi kwemigca ukulinganisa ukuba isithandwa sakho sele sinikezele. Oku kukuthandana okwethutyana, emva kwayo yonke loo nto! Kwaye ukuba benza kude emva kokuphanga umnxeba, kunokuba lixesha lokuba bahambe.
Sebenzisa amanyathelo okuvula amanyathelo xa usenza inyathelo lokuqala. Ufuna umhla onokubakho ukuze unamathele kwisithambiso. Ke, benzeni. Ngaphandle koko, awusoze ufumane imiyalezo yakho iphendulwe, kwanayona app ilungileyo yokukhangela!
Musa ukuba krwada
Eyona ndlela ilungileyo yokungaze uzenzele umhlaba kumdlalo onokubakho kukuba krwada. Kunqande ukuba, ewe, ufuna ulwalamano olunzulu oluqhelekileyo.
Ngaba ujonge imidlalo enokubakho kufutshane nendawo okuyo? Emva koko yenze eqongeni ngeempawu zendawo. Indawo efana neTinder inokukufumanela enye, okanye nangaphezulu, ii-hookups zalapha.
Uhlala njani ukhuselekile xa ujongana neeNkqubo zokuDibana
Ukhuseleko luza kuqala xa ufuna amaqabane ngokudibana nee -apps, kubandakanya iihapps. Ufuna ukugcina iso kwezi ngcebiso:
Musa ukwabelana ngolwazi lwakho lwezemali
Dibana esidlangalaleni okokuqala
Qinisekisa (umrhumo) iintlawulo zenziwe kwiseva ekhuselekileyo
Ukuba uthatha isigqibo sokusondelelana, sebenzisa protection
Ezona ndawo ziKhulu zokuHamba kunye neeNkqubo: Indawo yokuThatha
Ukuthandana kwi-Intanethi akufuneki kube nzima. Nokuba ufuna ezonaapps zilungileyo zokufumana ii-hookups okanye iisayithi zokuthandana zokuhlangana okuqhelekileyo, sinethemba lokuba ukukhetha kwethu phezulu kunceda!
Ophumeleleyo kuthi ngu-AdultFriendFinder: Uninzi lwabantu apha alufuni nje kuphela ubudlelwane obuqhelekileyo kodwa luyabelana ngesondo. Imbaleki yethu yokuqala neyesibini yiHarmony kunye neTinder, ngokwahlukeneyo. Oku kulungiselela iimfuno zabantu abadala kunye nabantu abancinci, ngokulandelelana, ukuya kuthi ga kwisini esingaqhelekanga.
Ngoku, hamba uyonwabele nje into ongayaziyo!
Ikhaya likaGoogle ngokuchasene neAmazon Echo Ngaba lidabi leSmart kunye neZakhono
Hale Appleman we 'The Magicians' Talks Acting, Sex, kunye nezinye izinto ezinomdla
Ukuqhawula ukuthula, uJames Mattis ulumkisa uTrump ngokuchasene neMfazwe ne-Iran
Fumana i-Halloween Art Party yakho, kunye nezinye izinto ezi-Spooky zokwenza kule Veki
U-obama uthenga indlu enkulu eHawaii
iiapps ezinje ngetinder yesini
inkosana ibangele ukufa
iiarhente zokhuselo intombi yentombazana
Yeyiphi inethiwekhi edlala ngokungenazintloni
Unyango igadi yesikwere semadison
Ngaba kuya kubakho ixesha le-3 le-castlevania